Izay mafy no mandroso… - ewa.mg
Izay mafy no mandroso…
News - Izay mafy no mandroso…
Amin’izao ankatoky ny fiafaran’ny
ady mivantana amin’ny fihanaky ny valanaretina covid-19 izao, mila
irosoana sy andehanana mafimafy kokoa no ho ny teo aloha ny
raharaham-pirenena eo amin’ny fampandrosoana; eny, na tena
zava-dehibe sy maika aza ny fahamehana ara-pahasalamana
Amin’izao, zava-dehibe maika atao
ho vaindohan-draharaha koa ny fanarenana ny fiainam-bahoaka sy ny
firenena, ny fanonerana ny fahavoazana isan-tsehatra sy
isan’ambaratonga noho ny fihibohana tsy nahazoana nihetsika firy;
eny, hatramin’ny fanorenana ny firenena aza: mila ainga vaovao.
Aina sy hery vaovao amin’izay atao
izany. Toy ny hoe vao nivoaka ny hopitaly fitsaboana:
manatanja-tena mba handehanana sy hahavitana asa bebe kokoa no ho
teo aloha, mitandrin-tena mba tsy hiverenan’ny fahavoazana na
aretina… Fanapahan-kevitra amin’ny fijoroana sy firosoana
Koa tsy maintsy mihetsika ny tena,
sahy, mijoro, mandroso… Aina sy hery voalohany amin’izany ny
faharesen-dahatra sy fanapahan-kevitra amin’izay aleha sy atao: ho
aiza, haninona na hanao inona? Tsy ekena ary tsy hankaiza izay
mbola mitsapatsapa fa mila finoana ny raharaha.
Miara-dalana amin’izany ny
firaisankina sy fitoviam-pijery amin’ny tanjona mazava hoe:
hampandroso ny firenena, hanatsara ny fiainam-bahoaka. Na ireo hoe
mpanohitra aza: mampandroso ny firenena sy manatsara ny
fiainam-bahoaka ve izay lazaina sy atao; eny, tsy mitovy aza ny
Ny tsy fitovian-kevitra aza no
tokony hampandeha haingana kokoa ny raharaham-pirenena sy ny
fanatsarana ny fiainam-bahoaka amin’ny hoe fampandrosoana. Izay ve
ny zava-misy sy izay iainana amin’izao amin’izay lazaina sy
ataon’ny mpanohitra? Mila matanjaka raha tiana henoina sy
Sarotsarotra sy mafimafy ny
raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka taorian’ny hamehana
ara-pahasalamana? “Rehefa mafy ny mandroso, dia ireo mafy no
mandroso”, hoy ny filohan’i Etazonia teo aloha, i
John F. Kennedy. Izay mafy no mandroso, tsy miandry ny tsy
afaka na malemy tsy te handeha.
L’article Izay mafy no mandroso… a été récupéré chez Newsmada.
Nisy nahita teny Ambodihady ny ankizivavy iray ka naterina teny amin’ny biraon’ny polisy teny Ambohiamanarina, omaly, tolakandro. Tsy fantatra mazava ny mombamomba azy noho izy voalaza fa verivery saina. Nanaovan’ny polisy filazana tao amin’ny tambajotra « Facebook » ny fahitana azy. Tsy mbola nisy naka teny amin’ny biraon’ny polisy ilay ankizivavy, hatramin’ ny omaly hariva. L’article Fahitana ankizivavy est apparu en premier sur AoRaha.
Famatsiana herinaratra: 2 % monja amin’ny rano no voatrandraka
Anisan’ny tanjona amin’ny politika momba ny angovo azo havaozina ny hamatsiana herinaratra ny any ambanivohitra, be mponina sy miparitaka amina tanàna maro. Raha ny salanisa, mponina miisa 41 /km2 any ambanivohitra tsy manana herinaratra. Noho ny fahefa-mividy ambany, lafo loatra tsy mahatakatra ny angovo vokarin’ny Jirama amin’ny solika ny faritra maro, sady tsy tongan’ny famatsiana. Ny taona 2017, namoahana lalàna vaovao ny fanitarana sy fanamoràna ny fitrandrahana herinaratra, tohanan’ny fiaraha-miasa any ivelany, fiaraha-miasan’ny fanjakana sy ny tsy miankina, na samy tsy miankina, niantsoana ireo mpampiasa vola ho amin’ny famokarana herinaratra azo havaozina.Tsy tratra ny tanjona, ny zava-misy ankehitriny 2% monja amin’ny rano no voatrandraka amina toby 660 hita manerana ny Nosy. 350 amin’ireo toby ireo no afahana mamokatra 1 Mw hatramin’ny 20 Mw, tokony ho mora vidy zakan’ny any ambanivohitra. Vao mainka sarotra ny hahatongavana amin’izany, ankehitriny, satria mihena ny rano misy amin’ireo toby ireo noho ny fivadihan’ny toetr’andro. Nefa ny tanjona napetraka amin’ny politika momba ny angovo, 75 % alaina avy amin’ny rano alohan’ny 2030.Mahazo herin’ny masoandro indray ny faritra rehetra manerana ny Nosy, 2800 ora isan-taona, ahazoana angovo 1600 Kwh, saingy tsy ampy 5 % ny voatrandraka amin’izany. Mbola tsy asiana resaka firy ny avy amin’ny rivotra nefa manana ny lafy valon’ny Nosy mandavan-taona.Nahena 50 % ny hetra sy habaNofaritana tamin’ny tetibolam-panjakana 2017 ny fampiasam-bola amin’ny sehatry ny angovo azo havaozina. Nahena ho 50 % ny hetra sy haba alaina amin’ireo kojakoja samihafa entin’ny mpampiasa vola, iaraha-miasa amin’ny EDBM*. Na eo aza ireo orinasa tsy miankina maromaro manampy ny Jirama, tsy ampy betsaka ny fampiasam-bola, vitsy ny fitaovana, tsy miitatra ny tetikasa, tsy mandeha ny fitsinjarana, tsy hita firy ny fikojakojana. Miankina betsaka amin’ny herinaratra anefa ny sehatry ny fizahantany, ny fambolena, ny fifandraisan-davitra, ny asa vaventy, sns. Antony mbola mampihisatra ny toekarena eto an-toerana. R.MathieuLégende : Toby Sahanivotry mamokatra 16,5 Mw, any Vakinankaratra. EDBM*: Economic development board of Madagascar L’article Famatsiana herinaratra: 2 % monja amin’ny rano no voatrandraka a été récupéré chez Newsmada.
Lalana mampandroso ny lalàna
Fifampifehezana eo anivon’ny fiarahamonina ny lalàna: fandrarana izay tsy azo atao, fanerena amin’izay tsy maintsy atao… Mamaritra ny zo sy adidin’ny tsirairay. Miara-dalana izay fa tsy mandeha ila na mandringa: misy te hanana sy hisitraka ny zony fa tsy te hanao adidy, na manao adidy fa tsy manana na tsy misitraka ny zony. Ny lalàna dia lalàna. Mafy ny lalàna, saingy izay ny lalàna. Tsy misy olona heverina ho tsy mahalala lalàna. Mba tsy ho fialana ny hoe tsy mahalala lalàna amin’ny fandikana izany.Amin’ny tany repoblikanina misy fisaraham-pahefana, eo ny fahefana mpanao lalàna. Ireo solo vavan’ny vahoaka voafidy izany. Ankoatra izay, misy karazany ny didy aman-dalàna, manana ny ambaratongany avy: lalàmpanorenana, lalàna fehizoro… Eo koa ny hoe didy hitsivolana, didim-panjakana, didim-pitondrana. Inona no itanisana izany rehetra izany? Misy, rey olona, ny mitady amorona lalàna ifampifehezana amin’ny hafa eo amin’ny sehatra misy azy. Hafa ny hoe dina ifampifehezan’ny mpiray dina.Ny fahamaroana isa no enti-miady amin’ireo mitady hamorona lalàna ho azy na hanao jadona amin’izany. Amin’izay heveriny ho marina ho azy, mahasoa azy, mety aminy… Tsy heverina ny hafa? Rehefa indray mamo lava, ohatra, ny iray tanàna, izay tsy misotro no tsaraina hoe adala. Na ny hadalan’ny maro no hoe fahendrena? Na izay fomba amam-panao, hita izao fa tsy mahasoa ny hafa na mety mahatsara ny tena aza: tadiavin’ny sasany havadika ho lalàna, tsy eo amin’izy samy izy ihany fa ho an’ny hafa koa.An-dalana amin’ny fampiharan-dalàna izao ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga. Misy ny tsy mahazaka, tsy te hofehezina, te hametraka ny lalàna ho azy… Izay no anton-dresaka eto. Rehefa maromaro na hoe maro an’isa ny minia manohitra lalàna na mamorona lalàna ho azy, heverina na havadika ho marina, ekena, mahasoa… ? Tsy mbola mety ho kolontsaina ny fanarahan-dalàna. Tsy moramora na vetivety ny fampanarahan-dalàna heverina ho zava-baovao? Mila heverina izany raha tena te handroso…Rafaly Nd.L’article Lalana mampandroso ny lalàna a été récupéré chez Newsmada.
Ceni: ”Aoka ho tonga saina”
“Tsotra fotsiny ihany ny zavatra teneniko ao anatin’izay: ny fahatongavan-tsain’ny kandidà mihitsy… Izany kandidà solombavambahoaka izany, hamorona sy handrindra ary handany ny lalàna rehetra misy eto Madagasikara.” hoy ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery, teny Alarobia, omaly, monoloana ny tsy fanarahan-dalàna afitsoky ny ankamaroan’ny kandidà amin’ny fampielezan-kevitra amin’izao fifidianana depiote izao, na amin’ny fametahana peta-drindrina fotsiny, ohatra.“Ho aiza isika raha tsy hanaraka ny lalàna misy eto izany olona rehetra izany. Ho aiza izany isika amin’izany?”, hoy izy. Mila olona tonga saina sy tomponandraikitra i Madagasikara mba hivoahana ao anatin’ny olana mahazo azy. R.Nd. L’article Ceni: ”Aoka ho tonga saina” a été récupéré chez Newsmada.
KMF/Cnoe : “Mila fahazoan-dalana ny fikitihana ny lisi-pifidianana”
“Alalana avy aiza moa no ahazoana mikitikitika ny lisi-pidianana? Lalàna manao ahoana no napetraka na navoaka? Oviana no ahazoana manao an’izay? Misy lalàna sy fitsipika eto amin’ny tany sy ny firenena.”Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe Fanabeazana olom-pirenena, Andriamalazaray Andoniaina, momba ny fijerin’ny Ceni manokana indray ny lisitry ny mpifidy amin’izao fotoana izao.Manomboka ny 1 desambra no natao ikitihana ny lisitry ny mpifidy, mandra-pahatonga ny famaranana izany tena izy: ny 15 mey ny taona manaraka. Izany no fikitihana ny lisitry ny mpifidy. Tsy hoe mikitika izany rehefa te hikitika, tsy mikitika izany, rehefa tsy te hikitika.Atao tandrametaka aloha ny raharaha, avy eo vao mody mikoropaka manao vahaolana vonjimaika. Tsy fomba izany ary tsy tokony hatao.“Raha tiantsika hokitihina ny lisitry ny mifidy, misy fomba fanaovana azy”, hoy izy. Araka ny lalàna sy ny didy aman-pitsipika tokony ho izy no anaoavana azy, ary mihetsika ny Ceni sy ireo rantsa-mangaikany rehetra mandamina amin’izay fijerena na fanitsiana indray ny lisitry ny mpifidy izay.“Rehefa tsy misy ny didy amam-pitsipika manome alalana amin’ny fikitihana ny lisitry ny mpifidy, tokony hokitikitihina io fa mampihena ny fitokisan’ny vahoaka ny mpitondra”, hoy ihany izy.R.Nd. L’article KMF/Cnoe : “Mila fahazoan-dalana ny fikitihana ny lisi-pifidianana” a été récupéré chez Newsmada.
Kariera Anjomakely Ivato: roa lahy naratra mafy nipitihan’ny vato napoaka tamin’ny vanja
Ny iray, simba mihitsy ny tarehiny. Ilay faharoa, potika ny tanany. Azo lazaina ho tena voa mafy tokoa ireto roa lahy mpamaky vato, eny amin’ny kariera Anjomakely Ivato ireto. Fiparitahan’ny vato napoaka tamin’ny vanja no nahavoa azy ireo, ny faran’ny herinandro teo.Samy mbola manaraka fitsaboana etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha izy roa lahy ireto amin’izao fotoana izao. Voa mafy tokoa, satria any amin’ny faritry ny loha no naratra ho an’ilay iray voalohany. Ilay faharoa, potika mihitsy ny rantsan-tanany, naratra nipitihan’ny vato koa ny vatany. Mpamaky vato eny amin’ny kariera Anjomakely Ivato no asan’ny fianakaviany. Marihina fa mikarama izy roa lahy ireto amin’izany asa famakiam-bato izany mba hanampiana ny fidiram-bolan’ny ray aman-dreniny. Vao 15 taona monja ilay zandriny, raha 26 taona kosa ilay zokiny.Nananosarotra ihany ny fitsaboana azy ireo, manoloana ny fahasahiranan’ny fianakaviany. Indrindra ho an’ilay zokiny izay azo lazaina ho tena voa mafy. Fantatra mantsy fa mbola misy piti-bato tavela amin’ny handriny, misy faritra voadona ihany koa any amin’ny atidohany. Voalaza aza fa hoe mety hiafara amin’ny fanalana ny masony ilany mihitsy izao ratra mahazo azy izao. Miankina amin’ny fitiliana tsy maintsy atao amin’ny “scanner” no ahafahana manao ny fandidiana azy. Izany hoe, ilana vola misimisy ihany, araka ny iaraha-mahalala.Efa vita soa aman-tsara, omaly kosa, araka ny fantatra, ny fandidiana ny tanan’ilay zandriny.Aorian’izany, tsy maintsy mbola hitohy ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso ny fivoaran’ny fahasalaman’izy ireo.Antso tolo-tanana…Eo anoloan’izany indrindra no anaovan’ny fianakaviany antso tolo-tanana ho an’izay malala-tanana ka afaka hifanampy amin’ny fitsaboana ireto roa lahy niharan-doza tampoka teo am-panaovana ny asany izao ireto. Azo lazaina ho fianakaviana sahirana ihany izy ireo, kanefa hiaraha-mahalala ny fandaniana eo anatrehan’izao voina izao. Isaoran’izy ireo sahady izay vonona amin’izany ka hanolotra izay foiny, na hiantso ny laharan-telefonina 034 31 311 88. Ankoatra azy roa lahy, naratra tamin’izao fipoahana izao ihany koa ny rain’izy ireo, saingy tsy dia misy atahorana loatra ny aminy. Henintsoa HaniL’article Kariera Anjomakely Ivato: roa lahy naratra mafy nipitihan’ny vato napoaka tamin’ny vanja a été récupéré chez Newsmada.
Situation COVID-19 du 11-08-2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « Situation COVID-19 du 11-08-2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.D’après la porte parole du CCO, Pr Vololontiana, entre le 19 mars et ce 11 août, Madagascar a enregistré 13 317 cas de contaminations à la maladie virale. Néanmoins, le nombre des personnes contaminées continue de diminuer depuis un certain nombre de jours, car ce mardi 11 août 2020, 115 nouveaux cas ont été détectés. 43 de ces nouveaux cas sont localisés dans la région d’Analamanga, 29 nouveaux cas dans la région de Vakinankaratra, 14 nouveaux cas dans la région d’Alaotra Mangoro, 10 nouveaux cas dans la région de Boeny, 10 nouveaux cas dans la région Atsimo Andrefana, 3 nouveaux cas dans région Anosy, 3 nouveaux cas dans la région Amoron’i Mania, 1 nouveau cas dans la région Atsinanana, 1 nouveau dans la région d’Itasy et 1 nouveau cas dans la région de Sofia. Par ailleurs, 265 personnes sont totalement guéries portant à 11 276 guérisons depuis le début de la pandémie. 1889 patients sont en cous de traitement dont 98 presentent des formes grave. Jusqu’à présent Madagascar a effectué 49742 tests PCR et 3798 tests geneXpert. Le CCO-Covid-19 a annoncé qu’une personne vient d’être emportée par le coronavirus, donnant ainsi un total de 152 décès dus au Covid-19 dans toute la Grande Ile.L’article Situation COVID-19 du 11-08-2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
«Paramédicaux»: Sesilany ny fivoriambe isan-tendro
Mahatsiaro ho ankilabao ireo «paramédicaux» nanao ny ainy tsy ho zavatra nandritra ireny valanaretina nivaivay teto amin’ny firenena ireny satria maro ireo milaza fa tsy mbola nandray ny vola tokony ho anjarany. Hisy ny fivoriambe hatao isan-tendro hataon’izy ireo hifampizarana ny zava-misy sy ny dingana fangatahana iza­ny vola tambin’ny niasana mafy izany. Notanterahina ny 22 oktobra teo ny fivoriambe ho an’ ny any Soalala. Hanatanteraka ny azy, rahampitso, ny any Fa­ratsiho ary amin’ny alatsinainy ny any Anosibe an’Ala. Ny 30 oktobra kosa no hivory ireo “paramédicaux” any Am­batolampy, any Arivonimamo ary any Miarinarivo. Mitohy izany ho an’i Manja amin’ny faran’ny volana oktobra izao. Araka ny baikon’ny mpitarika fikambanan’ny “paramédicaux”, tsy hisy ny fangatahana alalana amin’ny ambaratonga amin’ny toerana misy azy ireo. Tsy maintsy hatao ko­sa ny fampahafantarana amin’ ny lehibe isan’ambaratonga mi­kasika ny fivoriana hatao. “Manan-jo hivory izahay ka hanatanteraka izany ha­mon­dronana ny hery sy hanamafisana ny fitakiana fa tsy hatao vato natsindry ahazana ka atsipy rehefa vita ny nilana anay”, hoy ireo “paramédicaux”.Tatiana AL’article «Paramédicaux»: Sesilany ny fivoriambe isan-tendro a été récupéré chez Newsmada.
Te ho katolika alohan’ny Papa?
« Mahafinaritra ity Papa ity… ». Fotoana fohy taorian’ny nanosorana ny Papa Fransoa ho Ray masina, maro ny fanehoan-kevitra heno maneran-tany toy izany. « Papa misokatra amin’ny firehan-kevitra maro », « Papa mijery akaiky sy manome lanja ny maha olombelona », sns. Tsy ny mpino katolika irery, fa na ireo hafa finoana aza, nahenoana fanehoan-kevitra mirona mankany amin’izay avokoa. Eny, olon’ny fisokafana tokoa ny Papa Fransoa. Anisan’ireo nanana tombony manokana i Madagasi­kara satria vao tamin’ny taon-dasa no nandalovany teto ka nahita sy nandre akaiky ity dimbin’ny Apostoly ity. Fa toa ny vara-datsaka ny nilatsahan’ny vaovao, ary toy ny fitsoriakan’ny tselatra koa ny fipariahan’ny vaovao…Resabe tamina tambajotran-tserasera ilay voalaza ho fanambarana nataon’ny Papa Ray masina momba ny fiarahan’ny mitovy fananahana. Fanadihadiana tamin’ny teny espaniola, nandritra ny fetin’ny Sarimihetsika tao Roma, ny nataon’ilay mpanao gazety, i Evgeny Afinnevsky. Voalaza tao anatin’izany fa mano­hana ny fiarahana sivily eo amin’ny olona mitovy fananahana ny Papa… Eo ny fototry ny olana. Samy nandroritra izany araka izay zoro metimety aminy ny tsirairay. Samy nanana ny fandraisany azy koa. Ho an’ireo mpino katolika, sanganehana tanteraka, satria hoe tsy mifanaraka mihitsy amin’ny lalàn’ny Eglizy izany. Mazava loatra fa nandray izany ho fitaovana handotoana ny Fiketrahana masina sy ny Papa ireo hafa firehana… Misy ireo miezaka miaro fa nisy fahaizana “montage” tao anatin’ilay fanadihadiana, nanodinana izay tian’ny Papa hola­zaina. Na inona na inona anefa ny marina, ny zava-nisy dia nihaino ireo olombelona manana fironana amin’ny mitovy fana­nahana ny Papa. Nihaino sy nandray ny fanirian’izy ireo, amin’ ny maha samy zanak’Andriamanitra… Anisan’ireo nijoro vavo­lombelona tao anatin’ilay fanadihadiana i Andrea Rubera, nangataka raha mba afaka mivavaka any am-piangonana toy ny olon-drehetra. Mazava loatra fa nalahelo amin’ny fanilikilihana, ny tondro molotra, ny fanavakavahana tonga any amin’ny fikasihan-tanana aza, ny Ray masina. Ny zo maha olona no narovan’ny Ray masina. Tsy tao anatin’iny fanadihadiana iny ihany fa efa nialoha izao. Ny zo ho an’ireo mitovy fananana, tsy tokony hailiky ny fianakaviana sy ny mpiara-monina. Na marina na tsia ilay fanambarana, ny azo antoka kosa, tsy eken’ny lalàn’ny fiangonana katolika ny fanambadian’ny mitovy fananahana. Tsy midika fa tokony hailika satria tsy zanak’Andriamanitra izy ireo… Ka ahoana aza, nety sa tsia ny nataon’ny Ray masina? Io indray aloha izany ny anton-dresaka mandritra ny andro maromaro…Zo ny Aina RandriatsiresyL’article Te ho katolika alohan’ny Papa? a été récupéré chez Newsmada.
Minisitra Andrianainarivelo Hajo: “Hampandrosoana miaraka avokoa ny tanàn-dehibe”
Nifampiresahana tamin’ny mpiara-miombona antoka teknika sy avola (PTF) ny fampiharana ny politikam-pirenena ho amin’ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe (PNDU). Tafiditra amin’ny fanamarihana ny iray volana ho an’ny tanàn-dehibe isaky ny oktobra tahaka izao izany“Tsy misy tanàn-dehibe avahina fa ampiroboroboana sy ampandrosoana miaraka avokoa izy ireo. Efa misy ny tetikasa mandeha, amin’ny fampidirana rano madio fisotro sy herinaratra sy fotodrafitrasa samihafa. Ny fananganana tanàna vaovao. Tsy miandry fotsiny fa efa miasa”, hoy ny minisitry ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP), Andrianainarivelo Hajo, omaly tetsy Antanimena. Nanteriny fa ilaina ny fiaraha-miasa tahaka izao, ho amin’ny asa mivaingana amin’io PNDU io. “Tanjona ny hahafantarana ny olana amin’ny tanàn-dehibe. Mitombo ny isan’ny mponina. Mitombo koa ny olana ka tsy maintsy mivonona ho amin’izany isika. Efa tafakatra an-tanàn-dehibe ny fahantrana “, hoy ihany izy.Etsy andaniny, nitondrany fanazavana koa fa azo atao ny miroso amin’ny fandravana trano rehefa tonga amin’ny fanatsarana ahafahana manangana fotodrafitrasa goavana, toy ny fanorenana tanàna vaovao.Tokony hanara-dalàna avokoa ny rehetraNanteriny koa anefa fa misy ny fepetra tsy maintsy arahina amin’izany. Noraisiny ho ohatra ny fanamaboarana ny lalana “Rocade” mamakivaky tanàna. “Tanjona ny tsy hisian’ny fiantraikany ratsy amin’ny mponina ary ahina izy ireo”, hoy izy. Nambarany anefa fa napetraka ny arofanina tsy ahatongavana amin’izany amin’ny nametrahana ny drafitry ny tanàn-dehibe. Tsy tokony ho tonga amin’ny fandravana na ny fandrodanana isika fa fanatsarana aza raha manara-dalàna avokoa ny rehetra: ny kaominina, ny prefektiora, ny vahoaka, araka ny nambarany.Tsiahivina fa efa nisy ny atrikasan’ireo sekretera jeneralin’ny minisitera rehetra, ny avy amin’ny sehatra tsy miankina. Izao niarahana amin’ny PTF izao ary mbola ho avy ny an’ireo mpisehatra amin’ny tanàn-dehibe.Synèse R.L’article Minisitra Andrianainarivelo Hajo: “Hampandrosoana miaraka avokoa ny tanàn-dehibe” a été récupéré chez Newsmada.
Faritra Androy: vavaka iraisam-pinoana hampilatsaka ny orana
Mamely ny haintany miteraka mosary any amin’ny faritra Androy ka mahatonga ny mponina ho tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo ka hanaovan’ny fanjakana ezaka manokana amin’izao fotoana izao.Manoloana izany, nanapa-kevitra ireo mpitondra fiangonana ao amin’ny FFKM any an-toerana hanao vavaka iraisam-pinoana, omaly, ho fangataham-pitahiana hampilatsaka ny orana hanamandina ny tany.Natao tao amin’ny Ekar Meday Mahagaga Ambovombe izany, niarahan’ireo kristianina marobe avy amin’ny fiangonana samihafa ao Androy.Miandrandra orana ny any amin’ny faritra Androy satria efa tena karankaina ny tany, tsy misy hosotroina na ny olona na ny biby fiompy. Tsy misy hanavotana ny fambolena fa ritra ireo renirano mamatsy ny tanàna. Izany indrindra no nanaovana ny fanandratam-bavaka iraisam-pinoana namondronana ny finoan’ny kristianina any an-toerana ary notsaroan’ireo fiangonana hafa isam-pitandremana ihany koa omaly.Ttaiana AL’article Faritra Androy: vavaka iraisam-pinoana hampilatsaka ny orana a été récupéré chez Newsmada.
Fihanaky ny valanaretina maneran-tany: maherin’ny iray tapitrisa ireo matin’ny covid-19
Araka ny fanadihadiana nivoaka ny alatsinainy lasa teo, nahatratra 43 483 423 ny tranga Coronavirus voamarina amin’ny firenena 180 anatin’ny kaotinanta dimy. 1 159 300 ireo namoy ny ainy vokatry ny valanaretina. Firenena tena ahitana tranga maro sy olona maty betsaka ny any Etazonia, India, Brezila, Rosia ary Frantsa, araka ny fandalinana navoakan’ny teknisianina. Any Frantsa, ahafahana mandrefy ny fivoaran’ny valanaretina ny herinandro maromaro ho avy. Amin’izao fotoana izao, mitovy amin’ny zava-misy tamin’ny fotoana nirongatan’ny valanaretina voalohany tany an-toerana ny tranga ankehitiriny ka mampanahy ny mpitsabo sy ny mpitondra any an-toerana. Raha departemanta vitsivtisy no tena nahitana tranga maro niditra teny amin’ny hopitaly. Saika manerana ny firenena iray manontolo no misy ny tranga nandritra ny andro maromaro farany. Efa mihatra ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina any amin’ny faritra maro ary nahena ny ora ahafahan’ny toeram-pisakafoana misokatra ho an’ny toerana voatondro.Nangonin’i VonjyL’article Fihanaky ny valanaretina maneran-tany: maherin’ny iray tapitrisa ireo matin’ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.
Fambolena zava-mahadomelina: saron’ny zandary ny sahan-drongony 3 hektara
Tra-tehaky ny zandary avy ao Ambilobe ny toeram-pambolena rongony mirefy 3 hektara. Sarona tamin’izany koa ny rongony 20.000 fototra tao Maroamalona, fokontany Bobantsery, kaominina ambanivohitr’i Anaborano Ifasy ao Ambilobe. Tratra tamin’io fidinana tampoka nataon’ny zandary avy ao Anaborano io koa ireo rongony milanja 540 kilao sy ny trano heva miisa telo tao an-toerana. Lehilahy dimy ihany koa voasambotra. Nahitana ny mpividy, ny mpamboly, ny mpitatitra ny rongony avy ao amin’io toerana io ihany. Nanaovana famotorana ireo voasambotra ary hatolotra ny fampanoavana aorian’izay. « Tsy maintsy nodorana kosa ireo rongony izay mitarika ny tsy fandriam-pahalemana », hoy ny zandarimariam-pirenena, loharanom-baovao. Misaotra amin’ny fiaraha-miasa amin’ireo nanome loharanom-baovao ny zandary. Mitohy hatrany ny ezaka ataony amin’ny ady amin’ny famokarana sy fanapariahana zava-mahadomelina.Henintsoa HaniL’article Fambolena zava-mahadomelina: saron’ny zandary ny sahan-drongony 3 hektara a été récupéré chez Newsmada.
Nosasana fa saika hamidy: kila tsy nisy noraisina ilay fiara 4×4, BMW
Nanaitra ny mpandalo sy nampitangorona olona maro tetsy 67ha avaratra manakaiky ny biraon’ny Seimad ny firehetan’ny fiara 4X4 marika BMW X5, omaly antoandro tokony ho tamin’ny 11 ora sy 18 minitra. Kila tsy nisy noraisina intsony ny fiara vokatry ny afo niredareda. Mbola nipoaka ihany koa izany ka nanaitra ny manodidina.Fiara saika hamidy ity tra-doza ity. Teo am-panasana azy no nanomboka nirehitra ny fiara. Raha ny filazan’ireo nanatri-maso, « cours-circuit » ny nahatonga ny firehetana nitarika ny fahasimbana tao anatin’ny minitra vitsy. « Avy nosasana ilay fiara, napetraka naka toerana ary nosoloina ny batterie », hoy ny fanazavan’ny mponina teny an-toerana. Nanohy ny asa fanadiovana kosa ny mpanadio. Fotoana fohy taorian’ny nanombohana ny fanadiovany ny anatin’ny fiara. Nahatsikaritra firehetana tao amin’ny « capot » an’ilay fiara ilay mpanadio. Nitady ny fomba nanokafana izany anefa izy, saingy tsy nety nisokatra ilay capot. Nihanahazo aina, araka izany, ny afo ka voatery niantso ny tompona fiara ralehilahy. Minitry vitsy monja taorian’izay, efa afo nijoalajoala ny teo amin’ilay fiara 4×4. Vokany, naira-nisalahy ny rehetra nanondraka fasika sy ranon-tsavony namonoana ny afo, saingy tsy nahafaty azy izany. Teo koa ireo niantso ny sampana mpamonjy voina. Ny sasany moa dia nitangorona nijery izany. Vokany, tsy voafehy ny afo ary kila tsy nisy noraisina intsony ilay fiara BMW X5 tao mandra-pahatongan’ireo mpamono afo.Henintsoa HaniL’article Nosasana fa saika hamidy: kila tsy nisy noraisina ilay fiara 4×4, BMW a été récupéré chez Newsmada.
Fanasaziana sy Fanarenana :: Ankizivavy roa, 12 sy 14 taona, voampanga ho nandoro tanety
Nalefa tazonina eny amin’ny toby fitazaina zaza maditra any Faravohitra ireo ankizivavy roa, 12 sy 14 taona, samy voampanga ho nandoro tanety, teny Ankazomalaza, Mangabe ary Ankazobe, samy ao anatin’ ny kaominina Ambohimanga Rova, herinandro vitsy lasa izay. Avy amina fahadisoam-panantenana teo amin’ireto zaza no antony nandrehetan’izy ireo ny teo amin’ny toerana niaingan’ny afo, araka ny tatitra azo avy tamin’ny mpanao famotorana. Tsy noho ny antony goavana, tahaka ny fandre mahazatra amin’ny filan’ireo mpiompy mandoro tanety mba hahafahan’ny omby miraoka ny ahitra maitso avy eo, no nahamay ny tanety efa ho 20ha, teny Ankazobe, kaominina Ambohimanga Rova. Ankizivavy roa diso fanantenana vokatry ny tsy fahitana na inona na inona teo amin’ny manodidina ny fasana vao avy nandevenana no voalaza fa niteraka hasosorana sy nahatonga azy ireo handrehitra ny afo. Zanaka tompon’ andraikitra Nampahafantarin’ny mpanao famotorana nanaraka akaiky an’ity raharaha ity fa vohitra masina teo amin’ny toerana niantombohan’ny fahamaizana, teny Ankazobe. Nohazavain’ iretsy voalohany hatrany fa matetika no misy zavatra latsaka foana eny manodidina ny toerana rehefa avy misy fandevenana. Nanantena ny nahita zavatra teny ireo ankizy, kinanjo tsy nisy na inona na inona, tamin’io fotoana io. Noho ny hakiviana, hoy ihany ireo mpanao fanadihadiana, no nandoran’ireo ny tanety. Fantatra, rehefa nandeha ny famotorana, fa zanaky ny lehiben’ny fokontany sy ny polisim-bohitra ireto roa vavy voatondro ho tompon’antoka tamin’ny firehetan’ny tanety manodidina ny 20ha. Natolotra ny Fitsarana, tamin’ny alatsinainy 19 oktobra lasa teo, izy roa vavy. Naterina any amin’ny toby fitaizana zaza kamboty, taorian’izay. Mialoha izany, dia notazonina tany amin’ny tobin’ny zandarimaria ny rain’izy ireo tsirairay avy, saingy navotsotra ihany, nony avy eo. L’article Fanasaziana sy Fanarenana :: Ankizivavy roa, 12 sy 14 taona, voampanga ho nandoro tanety est apparu en premier sur AoRaha.
One Jah Mistik Fanahy: “Hiderana an’Andriamanitra ny mozika”
Rakotomanga Hasina (Sinayah) na i One Jah Mistik Fanahy, eo amin’ny tontolon’ny mozika. Niaina sy lehibe ao anaty mozika rap izay tena namolavola ny talenta ao anatiny izy. Niaraka amin’ireo zoky tamin’izany nanangana « clan », toy ny “Dix clan”. Nampivelatra ny kolontsaina rap ao anatiny ao izy io, raha ny filazany. Ny nahatonga azy hivoy manokana ilay gadona, «… satria ny tanora no tena kendrena amin’izao asa fitoriana izao. Tokony hifono hafatra, mitaiza sy manabe anefa ny mozika. Indrindra, tokony hiderana an’Andriamanitra ».Efa betsaka ny hira vita taloha, saingy tsy avoaka intsony ireny satria hiran’izao tontolo izao. Mieritreritra ny hamoaka “album” iray, mitondra ny lohateny hoe « Katolikos », ny tenany. Efa misy rindrantsary “clip” vita sy rakikira “Ho an’i Mama” miparitaka amin’ny tambajotran-tserasera “facebook”, amin’izao. Marihina fa mpikambana amin’ny antoko mpihira ao amin’ny Feon’Anjomara vaovao, Ekar Kristy Mpanjaka Manjakaray, izy ary anisan’ny mpamoronkira ao. « Hanteriko fa nisafidy ny rap, ny roots, ny reggae amin’ny asa fiderana aho satria ny tanora no tena tiako hiantefan’ny antson’Andriamanitra », hoy i One Jah Mistik Fanahy.Narilala L’article One Jah Mistik Fanahy: “Hiderana an’Andriamanitra ny mozika” a été récupéré chez Newsmada.
Tampody fohy «2e vague »…
Niverina nihiboka sy nandray fepetra ny ankamaroan’ireo firenen-dehibe any ivelany any amin’izao fotoana izao. Mailo tanteraka izy ireo noho ny fiverenan’ny valanaretina Covid-19. Anjatony maro isan’andro ireo maty ary analiny ireo tranga vaovao. Naverina noraisina ny fepetra maromaro. Anisan’izany ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina. Ny famerana ny isan’ny olona mivorivory… Ahina mafy ny hahamaro ireo lavo sy ny ho tratran’ny valanaretina amin’ny volana novambra mitsidika io. Tsy mbola tafavoaka ny ala izao tontolo izao. Tahaka izany koa ny eto amintsika. “Ramalina aza, mifehy hazo tokana”. Tsy tokony ho mandrimandry manana aretina. Tsy mbola tapitra niaraka amin’ny fanafoanana ny hamehana ara-pahasalamana, herinandro lasa izay, akory ny ady. Maro ireo tsy taitra sy tsy mivaky loha intsony eny an-dalana eny. Any anaty fiara fitateram-bahoaka any. Tsy manao arovava orona, tsy voahaja ny elanelana iray metatra. Tsy misy miraharaha intsony fa samy mandeha samy mitady. Voaporofon’ny antontanisa herinandro anefa fa mbola eo ary tsy mbola foana ny valanaretina. Maherin’ny 100 ireo tranga vaovao ary enina ireo maty. Hoatra ny hadinontsika fa olona telo no nitondra io valanaretina io eto ka nampihiboka antsika fito volana teto. Niteraka olana samihafa teo amin’ny fihariana, ny sosialy sy ny toekarena hatrany amin’ny politika noho ny fepetra samihafa tsy maintsy napetraka, niadiana amin’izany.Ekena fa efa atao varoboba ny tambavy na ny fanafody iadiana amin’ity valanaretina ity, saingy aleo mailo sy mitandrina ihany. Aoka hanenjana ny tompon’andraikitra ka hanara-maso sy hanasazy ireo tsy manaja ny fepetra na koa ireo mihoa-pefy. Aoka samy handray andraikitra ny rehetra, hiarovana ny tena sy hiarovana ny hafa koa. Mahazo vahana ny tampody fohin’ity valanaretina ity any ivelany any. Mba tsy ho tonga eto amintsika izany “2e vague” izany.Synèse R. L’article Tampody fohy «2e vague »… a été récupéré chez Newsmada.